MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta oo Axad ah si wadajir ah xariga uga jaray dhismaha Safaaradda cusub ee Jabuuti.
Wadooyinka ayaa xiran maalintii labaad waxaana la dhigay ciidamo boolis iyo miliatary isagu jira, iyadoo shacabka ay lugahooda maalayaan si ay goobahooda waxbarashada, caasimaadka iyo shaqooyinka u garaan.
Furitaanka Safaaradda cusub oo laga dhisay degmada Cabdicasiis waxaa ka qeybgalay madax sare oo ka kala tirsan labada dowladood, diblumaasiyiin iyo saraakiil kale.
Madaxweyne Geelle ayaa maanta la filayaa inuu ka qeybgalo furitaanka kal-fadhiga 5aad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacaysa xarunta tababarka ciidamada ee Jeneraal Kaahiye.
Jabuuti ayaa kamid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Africa ee AMISOM kuwaasoo ka howlagalaya gobolka Hiiraan.
Villa Soomaaliya ayaa waxay fahfaahisay heshiiska ay isla meel-dhigeen labada madaxweyne.